နောင်ရေးအတွက် စုနိုင်ဖို့လို | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aung San/Aung San Suu Kyi » နောင်ရေးအတွက် စုနိုင်ဖို့လို
Posted by ခင်ခ on Jun 19, 2015 in Aung San/Aung San Suu Kyi, Poetry, Politics, Issues | 8 comments
ဒီနေ့ အမေစု (၇၀)ပြည့်ခဲ့ပြီ
မဲ အလိမ်မခံရဖို့ အရေးကြီးတာမို့ ဝီရိယစိုက်ထုတ်ပြီး စစ်စေချင်ပါတယ်ဗျာ။
စစ်ဖွတ် သက်တမ်းထပ်ရှည်မယ်ဆို ကျနော်တို့ အပြစ်ဖြစ်သွားပါပြီ။
မဲ တစ်ခုတည်း အားကိုးလို့မရဘူးထင်တယ်….
အဲ့မဲ ရလဒ်ကို အကြွင်းမဲ့ ပစ်မယုံနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်…
ဒေါ်စု ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပြီး သမ္မတဖြစ်မယ်လို့ နက္ခတ်ပညာရှင် ဟောကိန်းထုတ်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ လာမယ့်ရွေး ကောက်ပွဲမှာ အပြတ်အသတ်အနိုင်ရရှိပြီး သမ္မတဖြစ်မယ်လို့ နိုင်ငံကျော် မြန်မာနက္ခတ်ပညာရှင် စံဇာဏီဘိုက ဟောကိန်းထုတ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အသက် ၇၀ ပြည့် မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့ ဇွန်လ ၁၉ ရက်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာမှာ ဟောကြားချက်ဖြစ်ပြီး အသက် ၇၀ ပြည့်ပြီးတာနဲ့ သူ့ရဲ့ ရှေးဘုန်းရှေးကံမြင့်လာပြီး ဒုက္ခပေးခံရခြင်း၊ လုပ်ကြံခံရခြင်းတို့ကနေ လုံးဝ ကင်းစင်သွားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
မြန်မာနက္ခတ်ပညာရှင် စံဇာဏီဘိုက “အင်မတန် ဇာတာကောင်းပါတယ်။ ဒီနေ့ကစပြီး လာမယ့် အနာဂတ်မှာ အန္တရာယ်ကင်း ဘေးကင်းစွာနဲ့ ထိပ်တန်းရောက်မယ်။ ၇၀ နဲ့ ၇၁ ကြား သူ့အတွက် အထွတ်အထိပ် ကံကောင်းတဲ့နှစ် ဖြစ်တယ်။ ဘ၀မှာ ပေးဆပ်ပြီး လုပ်ထားတဲ့အရာတွေရဲ့ ကောင်းသော အကျိုးဆက်ကို ရရှိမှာပါ။ ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်း နိုင်မယ်။ နိုင်ငံရဲ့ အမြင့်ဆုံးနေရာကိုလည်း သူရောက်မယ်။ သမ္မတက အမြင့်ဆုံးဆို သမ္မတနေရာ ရောက်မယ်။ ဒီအတွက်တော့ သူ့ရဲ့ ကံကြမ္မာကက ဒီမွေးနေ့ကစပြီး ထင်ရှားစွာ ပြသပါတယ်။ ၇၀ ပြည့်ပြီးတာနဲ့ တပြိုင်နက်တည်း သူ့ရဲ့ ရှေးဘုန်းရှေးကံတွေက တအားမြင့်လာတဲ့အတွက် ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေးကအစ နိုင်ငံတကာအဆင့် တိုးတက်မှုတွေ ဆက်တိုက်ရလာပါမယ်။ လုပ်ကြံခံရခြင်းတို့၊ ဒုက္ခပေးခံရခြင်းတို့ လုံးဝ ကင်းစင်သွားတယ်။”
မြန်မာပြည်ရဲ့ အနာဂတ်ကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ အနာဂတ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့ အချိန်အခါကောင်းကို ဒီနေ့ကစ ရောက်ရှိပြီလို့လည်း သူက ပြောပါတယ်။
၇၅ နှစ်လောက်အထိရော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ကံဇာတာ အခြေအနေ။
လာမယ့် အနာဂတ်တွေမှာလည်း သူ့ရဲ့အနေအထား ကံအခြေအနေ ဆက်မြင့်နေပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး တိုးတက်မယ်။ ၇၀ နဲ့ ၇၁ ကြား၊ နောက် ၇၂ နဲ့ ၇၃ ကြား၊ ၇၄ နဲ့ ၇၅ ကြားတွေမှာ ဆက်တိုက်ကောင်းပြီးတော့ အနာဂတ် မြန်မာနိုင်ငံကို ဦးဆောင်တဲ့ အမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ သူ့ကံကြမ္မာက သယ်ဆောင်သွားလိမ့်မယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကို တူရာသီက ပိုင်ဆိုင်တယ်။ တူရာသီကို ကုမ်ရာသီဖွားတွေရယ်၊ မေထုန်ရာသီဖွားတွေရယ် ဦးဆောင်ပြီး ပြောင်းလဲရင် ထူးခြားစွာ တိုးတက်မယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ မေထုန်ရာသီဖွား ဖြစ်တဲ့အပြင် မိန်းမသားတဦး ဖြစ်တဲ့အတွက် မြန်မာပြည်ရဲ့ အနာဂတ်ကို လာမယ့် ၅ နှစ်အတွင်း တမုဟုတ်ချင်း ပြောင်းလဲပြီးတော့ ထူးခြားစွာ အောင်မြင်အောင် ဖန်တီးနိုင်တယ်။ ပြီးတော့ ဒေါ်စုမွေးတဲ့ရာသီရဲ့ သဘာဝက သူများတွေ အံ့သြသွားလောက်အောင် မှော်ဆရာ၊ ပဉ္စလက်အတတ်ပညာရှင်တယောက်လို မြန်မာပြည်ရဲ့ အနာဂတ်ကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ အနာဂတ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့ အချိန်အခါကောင်းကို ဒီနေ့ကစ ရောက်ရှိပါပြီ။”
မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကြီးကို တွေးမိနေတဲ့ကြားက. . .
ဒီဘက် ဇာတာကို ဟော သလို ဟိုဘက် ဇာတာ ကိုရော ကြည့်ဖို့ သင့်သေး။
တိုင်းပြည် လူထု ဇာတာ ကိုလဲ ကြည့်သင့်သေး။
အားလုံး တိုက်ဆိုင်ချိန် မှဘဲ ဆင်းရဲတွင်း ထဲ မျက်နှာငယ် နေရတဲ့ ဘဝ က လွတ်မယ်။
ကံ ဆိုတာ အလုပ်ဆိုရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကလဲ အကောင်းဆုံး လုပ်နေတယ်။
အဘတို့ ကလဲ ဒီလောက် နဲ့တော့ လျှော့ဦးမည် မထင်။
. ကျီးမိုက် ကြီးများ (စာလုံးပေါင်း ကွဲသနော်) ဘဝ နဲ့ နာမည် သိက္ခာကို စတေးပြီး အာဏာ အတွက် စည်းစိမ် အတွက် ဆက်မိုက် ကြဦးမှာပါ။
သူတို့လဲ သူတို့ အတွက် ကြိုးစားဆဲ။
ဒီအချိန် – ကျွန်မတို့ ပြည်သူလူထု ရဲ့ ကံ (အလုပ်) က ဘာလဲ။
ကျွန်မ အဖေ ကတော့ ကျွန်မ ကို အမြဲ အားပေးတယ်။
ဒီလောက် (ဘက်မျိုးစုံ – တစ်ဖက်တောင်ထဲ မဟုတ်) ဖိနှိပ် နှောက်ယှက် အပုတ်ချ နေတဲ့ ကြား မှာ ကို ဒီလောက် တင့်တင့်တယ်တယ် နဲ့ တောင့်ခံ နေနိုင်တာ တော်ရုံ ဘုန်းကံ နဲ့တော့ မဟုတ်ဘူးတဲ့။
အဲဒါ တိုင်းပြည်ကို မေတ္တာစွမ်းအား ကြီး လွန်းလို့ တဲ့။
ကိုယ်ဆို စိတ်ကူးထဲ တောင် အစွန့်နိုင်တာတွေ၊ ဒုက္ခမခံနိုင်တာ တွေ ဟာကို။
သူရှေ့မှာ ရှိ နေလို့ တိုင်းပြည်ထဲ က လူ တွေ ကို လူ လို နဲနဲ ဆက်ဆံလာတာ။
မဟုတ်လို့ ကတော့ ဘုန်းတော်ဘွဲ့ တွေ က တရားဝင် နိုင်ငံတော်သီချင်း ဖြစ်သွားပြီး မနက်တိုင်း ဦးချ ခိုင်းနေခဲ့မှာ။
အိမ်တိုင်း သူတို့ပုံ တွေချိတ်ပြီး ဘုရင်မင်း တွေ လို ကိုးကွယ်ခိုင်းနေမှာ။
. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လို လူမျိုး မရှိခဲ့တဲ့ မြောက်ကိုရီးယား ကို သာကြည့်။
အထဲ မှာ လူ တွေ ဘည်လောက် အသိဉာဏ် တုံး နေပြီး ကမ္တာ နဲ့ အဆက်ပြတ်နေတယ် ဆိုတာ မြင်နေရတာ။
တကဲ့ “မိဘမဲ့ တိုင်းပြည်ဘဲ” (ဒါကြောင့် ပြုံး ရဲ့ အဲဒီ စာအုပ် ကို အတော်လေး ဖတ်ချင်နေမိတာ)
. မြန်မာ ပြည် က ကံကောင်း စွာ ရှေ့က ကာကွယ် ပေးခဲ့တဲ့ “မိခင်ကောင်းတစ်ယောက်” ရှိနေတာ ကို တန်ဖိုး မသိနိုင်ကြရင်လဲ
မညီမညာ ဟိုလို ဒီလို ယိမ်း ပြနေပြီး ဒီ တစ်ပွဲ မှာ ပွဲ သိမ်းလိုက်ကြပေတော့။
. ဒေါ်စုက ပြန်ပြောတာလေးလဲ သဘောကျလို့ ပြန်ပြောရဦးမယ်။ မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ် NLD ကို .မဲပေးကြပါ တဲ့။ ကဲ နိုဝင်ဘာရောက်ယင် မဲပေးလိုက်ကြပါဦးစို့။
. “ကျမတို့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကို ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာ အရင်တုန်းကမလုပ်ဖူးတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်တွေ ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့်ဆိုရင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ အားလုံးဟာ မိမိတို့ရဲ့မရွှေ့ပြောင်းနိုင်တဲ့ ပစ္စည်းများစာရင်း၊
မိမိတို့ရဲ့ ဇနီးခင်ပွန်းများရဲ့ မရွှေ့ပြောင်းနိုင်တဲ့ ပစ္စည်းများစာရင်း၊
မိမိတို့ရဲ့ ၁၈ နှစ်အောက်သားသမီးများရဲ့ နာမည်နဲ့ရှိတဲ့ မရွှေ့ပြောင်းနိုင်တဲ့ စာရင်းကို တင်သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်…
ဘဏ်အကောင့်ရှိရင်လည်း နံပါတ်ကိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်… စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ ပတ်သတ်မှူရှိရင် ဒါတွေအားလုံးကို တင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်…
ဒီလိုကျမတို့ လုပ်တယ်ဆိုတာဟာ ဘာဖြစ်လိ့လဲဆိုတော့ ကျမတို့ဟာ နိုင်ငံရဲ့တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်မဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အဂတိလိုက်စားမှု လုံးဝကင်းစင်ဖို့ လိုပါတယ်…
နောက်ပြီးတော့လည်း ကိုယ်စားလှယ်လောင်းလုပ်ချင်သောသူများ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများဟာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က တရားဝင် အချိန်မရွေး
မိမိတို့ရဲ့ မိသားစုများနဲ့ အခြားနီးစပ်သူများရဲ့ မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းတွေရော
ကိုယ်စားလှယ်လောင်းမဖြစ်ခင်တုန်းက အိမ်တလုံးကနေပြီးတော့ ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပြီးမှ အိမ်ဆယ်လုံး ဖြစ်သွားတယ်ဆိုပါတော့…
ဒီလိုကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ဆိုရင် အဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ မေးမြန်းစုံစမ်းတဲ့အခါ မှန်မှန်ကန်ကန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါမယ်ဆိုတဲ့ ခံဝန်ချက်ကိုလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ ကျမတို့ဒါကိုလက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်…